बुद्धिमान मानिसका हुन्छन यस्ता ४ खराब आनीबानी « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
बुद्धिमान मानिसका हुन्छन यस्ता ४ खराब आनीबानी
२३ फाल्गुन २०७४, बुधबार १३:३९
१. कुरैपिच्छे कसम खानेः
कुरैपिच्छे कसम खाने मान्छे सँग सँगत गर्नुपर्दा साँच्चीकै दिक्क लाग्छ । किनकी यस्ता मानिस झनै भरोसायोग्य हुँदैनन् । यस्ता मानिसहरु आफ्नो गल्ती तथा नियत ढाकछोप गर्नका लागि कसमको सहारा लिइरहेका पनि हुनसक्छन् ।
तर एक अध्ययन अनुसार कसम खाइरहने यस्ता व्यक्तिहरु दिमागी रुपमा चाहीँ तेज हुन्छन् । यिनीहरुको रवैया अन्य सामान्य मानिसभनदा फरक हुन्छ र प्रष्टै पहिचान गर्न सकिन्छ ।
२. रातमा कम निदाउनेः
बुद्धिमान मानिसहरु मन्द बुद्धिका मानिसको तुलनामा कममात्र सुत्दछन् । रातमा अबेरमात्र सुत्दछन् । बुढापाकाको भनाई अनुसार रातमा छिटो सुत्ने र बिहान सबेरै उठ्ने मानिस बुद्धिमान हुनुपर्नेहो । तर वैज्ञानिक रुपमा चाहीँ यसको उल्टो छ ।
एक अध्ययन अनुसर जो मानिसको आइक्यू ७५ को आसपास छ उनीहरु रातमा ११ बजे अगावै सुत्दछन् भने जसको आइक्यू १२५ भन्दा बढि छ उनीहरु रातको १ बजेपछि मात्र सुत्दछन् ।
३. भद्रगोल बसाईः
इन्टेलिजेन्ट अर्थात् बुद्धिमान मानिसहरुको एक अर्को खराब बानी हुन्छ की बस्ने कोठा भद्रगोल बनाउनु । जब तपाइँ त्यस्ता मानिसहरुको कोठामा जानुहुन्छ तब उनीहरुको कोठा तपाइँलाइ कहिल्यैपनि सुव्यवस्थित तथा सफाचट लाग्दैन । सामानहरु छरिएका हुन्छन् । बुद्धिमान मानिसहरु आफ्ना सामानहरु मिलाएर राख्दै जान्दैनन् । शोधकर्ताहरुका अनुसार आफ्नो आसपास हुने छरिएका सामानहरुकै माध्यमबाट उनीहरुलाई केही फरक ढंगले सोँच्ने क्षमता पैदा भएको हुन्छ ।
हाम्रो समाजमा अल्छी मानिसलाई कसैलेपनि मन पराउदैन्न । अल्छी व्यक्तिले कुनैपनि काम समयमा गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो धारणा हुन्छ तर वैज्ञानिकहरु भने ठिक उल्टो सोच्छन ।
माइक्रोसफ्टका मालिक तथा महान समाजसेवी बिल गेटसले एक पटक भनेका थिए “मैले अप्ठ्यारो काम गर्न अल्छी व्यक्तिलाई छान्ने गर्दछु, किनकी अल्छी व्यक्तिले उक्त काम गर्नलाई सजिलो समाधान निकालेको हुन्छ” । वैज्ञानिकहरुको खोज अनुसार अल्छी व्यक्तिले कुनैपनि काम गर्दा परिश्रम थोरै दिमाग धेरै लगाउने तथ्य पत्ता लगाएका हुन् ।एजेन्सीको सहयोगमा
प्रकाशित : २३ फाल्गुन २०७४, बुधबार १३:३९